Hamro Yatra | » के हो सुशान्त र यशराजको विवाद ? छानबिनमा जुट्यो प्रहरी के हो सुशान्त र यशराजको विवाद ? छानबिनमा जुट्यो प्रहरी – Hamro Yatra
> के हो सुशान्त र यशराजको विवाद ? छानबिनमा जुट्यो प्रहरी
के हो सुशान्त र यशराजको विवाद ? छानबिनमा जुट्यो प्रहरी
५ असार, काठमाडौँ । बलिवुड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको आत्महत्या प्रकरणमा प्रहरी छानबिनमा जुटेको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रहरीले यसै प्रकरणमा बलिवुडको ठुलो फिल्म निर्माण ब्यानर यशराज ब्यानरसँग सुशान्तसँग गरेको सम्झौताको विवरण माग गरेको छ । प्रहरीले सुशान्त प्रकरणमा यशराजसँगको सम्झौताको नाम जोडिएपछि सम्झौताको प्रति मागेको बताइएको छ ।
सुशान्तको आत्महत्या प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म उनकी बिजनेस म्यानेजर श्रुति मोदी, उनकी जनसम्पर्क प्रतिनिधि राधिका निहालको बयान लिइसकेको छ । त्यस्तै विहिबार प्रहरीले सुशान्तकी नजिककी साथी एवं उनकी अहिलेकी प्रेमिका भनेर प्रचार गरिएकी रिया चक्रवर्तीको समेत बयान लिइसकेको छ ।
त्यस्तै सुशान्तको अन्तिम फिल्म दिल बेचाराका निर्देशक मुकेश छावडासँग पनि प्रहरीले बयान लिएको छ ।
सुशान्तको मृत्यु प्रकरणले बलिवुडमा नातावादले फिल्म उद्योग बाहिरबाट आएका कलाकारलाई अगाडी बढ्न गाह्रो भएको बारे बहस चलिरहेको छ ।
सुशान्त र यसराज फिल्म्सका बिचको झगडा पनि उनको मृत्युको कारण मानिएको छ । यशराजले नयाँ कलाकारलाई साइन गर्दा कम्तिमा ब्यानरसँग ३ फिल्ममा काम गर्नुपर्ने शर्त राख्ने गर्दछ । सुशान्तले यशराजको फिल्म शुद्ध डिसी रोमान्स र डिटेक्टिभ व्योमकेशमा काम गरेका थिए भने तेस्रो फिल्म पिकेमा सानो भूमिकामा काम गरेका थिए ।
सुशान्तले पिकेको भूमिकासँगै आफ्नो यशराजसँगको सम्झौता सकिएको भन्दै बाहिरि ब्यानरमा काम गर्न थाले भने यशराजले पिकेको रोल सानो रोल भएकाले यसलाई सम्झौता अनुसार गणना गर्न नसकिने बताउदै सुशान्तलाई प्रताडित गरेको आरोप अहिले लागेको छ । तर यस बारेमा मिडियामा भने यस अघि कुनै रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थिएन ।